Iphindaphinda Inhlawulo Yokuqukethwe: Inganekwane, Iqiniso Neseluleko Sami | Martech Zone
Inhlawulo Yokuqukethwe Okuyimpinda: Inganekwane, Iqiniso Neseluleko Sami
NgoLwesine, ngoMashi 25, 2021 NgoLwesibili, Agasti 24, 2021 Douglas Karr
Sekuyiminyaka engaphezu kweyishumi iGoogle ilwa nenkoleloze yenhlawulo yokuqukethwe eyimpinda. Njengoba ngisaqhubeka nokufaka imibuzo kuyo, ngicabange ukuthi kungakuhle ukuxoxa lapha. Okokuqala, ake sixoxe nge-verbiage:
Kuyini Okuqukethwe okuphindwe kabili?
Okuqukethwe okuyimpinda ngokuvamile kubhekisela kumabhulokhi wokuqukethwe angaphakathi noma kuzizinda zonke ezingafana ngokuphelele nokunye okuqukethwe noma okufana ngokwazisa. Kakhulu, lokhu akukhona okokukhohlisa kwimvelaphi.
Google, Gwema okuqukethwe okuyimpinda
Iyini Inhlawulo Yokuqukethwe Okuyimpinda?
Isijeziso sisho ukuthi isiza sakho kungenzeka ukuthi asisekho ohlwini lwemiphumela yosesho ngokuphelele, noma ukuthi amakhasi akho ancishiswe ngokumangazayo ngokwezinga elithile kumagama athile. Akukho. Isikhathi. Google yaqeda le nkoleloze ngo-2008 noma kunjalo abantu basaxoxa ngakho nanamuhla.
Masikubeke lokhu embhedeni unomphela, bantu: Ayikho into enjengokuthi “inhlawulo yokuqukethwe okuyimpinda.” Okungenani, hhayi ngendlela abantu abaningi abachaza ngayo lapho besho lokho.
I-Google, Ifakazela Inhlawulo Yokuqukethwe Okuyimpinda
Ngamanye amagama, ukuba khona kokuqukethwe okuyimpinda kusayithi lakho ngeke kuholele isiza sakho. Usengabonakala kwimiphumela yosesho futhi ulinganise kahle emakhasini anokuqukethwe okuyimpinda.
Kungani iGoogle ifune ukuthi ugweme okuqukethwe okuyimpinda?
IGoogle ifuna umuzwa ophakeme womsebenzisi kwi-Injini Yayo Yokucinga lapho abasebenzisi bathola khona imininingwane yenani ngakho konke ukuchofoza komphumela wokusesha. Okuqukethwe okuyimpinda kungaphazamisa lolo lwazi uma imiphumela ephezulu engu-10 ekhasini lemiphumela yenjini yokusesha (serp) wayenokuqukethwe okufanayo. Kungakhathaza umsebenzisi futhi imiphumela yenjini yokusesha izodliwa yizinkampani ze-blackhat SEO ngokumane zakha amapulazi wokuqukethwe ukuze zibuse imiphumela yosesho.
Okuqukethwe okuyimpinda esizeni akusona isizathu sokwenza lokho kulelo sayithi ngaphandle kokuthi kubonakale sengathi inhloso yokuqukethwe okuyimpinda ukukhohlisa nokukhohlisa imiphumela yenjini yokusesha. Uma isiza sakho sinenkinga yokuqukethwe okuyimpinda… senza umsebenzi omuhle wokukhetha uhlobo lokuqukethwe ukukhombisa kumiphumela yethu yosesho.
Google, Gwema ukudala okuqukethwe okuyimpinda
Ngakho-ke asikho isijeziso futhi iGoogle izokhetha inguqulo ezoboniswa, kungani-ke kufanele gwema okuqukethwe okuyimpinda? Yize ungajeziswanga, wena may kusalimaza ikhono lakho lokulinganisa kangcono. Nakhu ukuthi kungani:
I-Google kungenzeka kakhulu ukuthi iye bonisa ikhasi elilodwa emiphumeleni… Onegunya elingcono ngama-backlinks bese ezofihla okuseleyo emiphumeleni. Ngenxa yalokhu, umzamo ofakwa kwamanye amakhasi wokuqukethwe okuyimpinda kumane kuwudoti uma kukhulunywa ngezinga lenjini yokusesha.
Izinga lekhasi ngalinye lisuselwa kakhulu kufayela le- ama-backlink afanelekile kubo kusuka kumasayithi angaphandle. Uma unamakhasi ama-3 anokuqukethwe okufanayo (noma izindlela ezintathu eziya ekhasini elifanayo), ungahle ube nama-backlink ekhasini ngalinye kunawo wonke ama-backlink aholela kolunye lwawo. Ngamanye amagama, ulimaza ikhono lakho lokuba nekhasi elilodwa eliqoqa wonke ama-backlink nokuma kangcono. Ukuba nesikhundla sekhasi elilodwa emiphumeleni ephezulu kungcono kakhulu kunamakhasi ama-3 ekhasini 2!
Ngamanye amagama… uma nginamakhasi ama-3 anokuqukethwe okuyimpinda futhi ngalinye lawo linama-backlink ama-5 lilinye… ngeke lilinganiswe nekhasi elilodwa elinama-backlink ayi-15! Okuqukethwe okuyimpinda kusho ukuthi amakhasi akho ancintisana futhi angabalimaza bonke kunokubeka ikhasi elilodwa elihle, eliqondisiwe.
Kepha Sinakho Okuqukethwe Okuyimpinda Emakhasini, Manje Yini ?!
Kungokwemvelo ngokuphelele ukuba nokuqukethwe okuphindwe kabili ngaphakathi kwewebhusayithi. Njengesibonelo, uma ngiyinkampani ye-B2B enezinsizakalo ezisebenza ezimbonini eziningi, ngingahle ngibe namakhasi aqondiswe umkhakha wenkonzo yami. Izincazelo eziningi zaleyo sevisi, izinzuzo, izitifiketi, amanani entengo, njll. Konke kungafana kusuka ekhasini elilodwa lomkhakha liye kwelilandelayo. Futhi lokho kunengqondo ngokuphelele!
Awukhohlisi ekubhaleni kabusha okuqukethwe ukuze ukwenze kube ngokwakho kumuntu ohlukile, kuyicala elamukelekayo ngokuphelele phinda okuqukethwe. Nasi iseluleko sami, noma kunjalo:
Sebenzisa Iziqu Zekhasi Ehlukile - Isihloko sami sekhasi, ngisebenzisa isibonelo esingenhla, sizofaka insizakalo kanye nomkhakha lelo khasi eligxile kulo.
Sebenzisa izincazelo zeMeta ezihlukile zekhasi - Izincazelo zami ze-meta zizohluka futhi ziqondiswe futhi.
Faka okuqukethwe okuhlukile - Ngenkathi imijikelezo emikhulu yekhasi ingahle iphindwe kabili, ngingahlanganisa le mboni kuzihlokwana, ezithombeni, emidvwebeni, kumavidiyo, kubufakazi, njll ukuqinisekisa ukuthi isipiliyoni sihlukile futhi siqondiswe kubabhekiswe ngqo.
Uma wondla izimboni eziyi-8 ngensizakalo yakho futhi ufaka lawa makhasi ayi-8 anama-URL ahlukile, izihloko, izincazelo ze-meta, namaphesenti amakhulu (ithumbu lami elingenayo idatha lingu-30%) lokuqukethwe okuhlukile, ngeke uqalise noma iyiphi ingozi yokuthi iGoogle icabange ukuthi uzama ukukhohlisa noma ngubani. Futhi, uma kuyikhasi elenziwe kahle elinezixhumanisi ezifanele… ungabeka kahle kuningi lazo. Ngingahlanganisa nekhasi lomzali ngokubuka konke okucindezela izivakashi kumakhasi amancane embonini ngayinye.
Kuthiwani Uma Ngimane Ngishintsha Amagama Edolobha Noma Esifunda Ngokukhonjwa Kwezwe?
Ezinye zezibonelo ezimbi kakhulu zokuqukethwe okuyimpinda engikubonayo amapulazi e-SEO athatha futhi aphindaphinde amakhasi endaweni ngayinye lapho umkhiqizo noma isevisi isebenza khona. Ngisebenze nezinkampani ezimbili zokufulela manje ezazinabaluleki bangaphambilini be-SEO abakha inqwaba yedolobha- amakhasi we-centric lapho avele amiselela khona igama ledolobha esihlokweni, incazelo ye-meta nokuqukethwe. Akusebenzanga… wonke lawo makhasi abekwe ohlwini kabi.
Ngenye indlela, ngafaka unyaweni ojwayelekile obala amadolobha noma izifunda abazisebenzisayo, ngafaka ikhasi lendawo yesevisi ngemephu yesifunda abasisebenzelayo, ngaqondisa kabusha wonke amakhasi wedolobha ekhasini lesevisi… futhi ngasebenza ... insiza amakhasi ezindawo zamakhasi nendawo yesevisi zombili zikhuphuke ngokwezinga.
Musa ukusebenzisa imibhalo elula noma ukufaka amapulazi wokuqukethwe ukufaka amanye amagama anjengalawa… ucela inkathazo futhi ayisebenzi. Uma ngingu-roofer ohlanganisa amadolobha ayi-14… ngincamela ukuba nama-backlinks nokushiwo okuvela kumasayithi wezindaba, amasayithi abalingani, nezindawo zomphakathi ezikhomba ekhasini lami elilodwa lokufulela. Lokho kuzongenza ngibekwe ohlwini futhi akukho mkhawulo wokuthi mangaki amagama angukhiye wokuhlanganiswa kwedolobha engingawalinganisa ngekhasi elilodwa.
Uma inkampani yakho ye-SEO ingabhala epulazini elinje, i-Google iyakwazi ukuyithola. Kuyakhohlisa futhi, ngokuhamba kwesikhathi, kungaholela ekutheni uthole isijeziso.
Vele, kukhona okuhlukile. Uma ngabe ubufuna ukudala amakhasi amaningi endawo abenokuqukethwe okuhlukile nokufanele kukho konke ukwenza isipiliyoni kube ngokwakho, lokho akukhona ukukhohlisa… lokho okwenzelwe wena uqobo. Isibonelo kungaba ukuvakasha kwedolobha… lapho insizakalo iyefana, kepha kunethoni yomehluko kokuhlangenwe nakho ngokwendawo okungachazwa ngezithombe nezincazelo.
Kepha Kuthiwani Ngokuqukethwe Okuyi-Duplicate Okungenacala okungu-100%?
Uma inkampani yakho ishicilele ukukhishwa kwabezindaba, ngokwesibonelo, lokho okwenze imijikelezo yayo futhi kwashicilelwa kumasayithi amaningi, usengafisa ukukushicilela nakuwebsite yakho. Sibona lokhu kaningi. Noma, uma ubhale i-athikili kusayithi elikhulu futhi ufisa ukuyishicilela kabusha isayithi lakho. Nayi eminye imikhuba emihle:
I-Canonical – A canonical link is a metadata object in your page that tells Google that the page is duplicate and they should look at a different URL for the source of the information. If you’re in WordPress, for example, and wish to update a Canonical URL destination, you can do this with the Isikhundla se-Math SEO plugin. Add the originating URL in the canonical and Google will respect that your page isn’t duplicate and the origin deserves the credit. It looks like this:
Phinda uqondise kabusha - Enye inketho ukumane uqondise kabusha i-URL eyodwa endaweni ofisa abantu bayifunde nezinjini zokucinga zikhombe. Kukaningi kunezikhathi lapho sisusa khona okuqukethwe okuyimpinda kuwebhusayithi bese siqondisa kabusha wonke amakhasi asezingeni eliphansi ekhasini eliphakeme kakhulu.
I-Noindex - ukumaka ikhasi ku-noindex futhi ngaphandle kwezinjini zokusesha kuzokwenza ukuthi injini yokusesha iliziye ikhasi bese iligcina ngaphandle kwemiphumela yenjini yokusesha. I-Google empeleni yeluleka ngokumelene nalokhu, ithi:
I-Google ayincomi ukuthi kuvinjelwe ukufinyelela kokukhasayo kokuqukethwe okuyimpinda kuwebhusayithi yakho, kungaba ngefayela le-robots.txt noma ezinye izindlela.
Uma nginamakhasi amabili aphindwe kabili, ngingahle ngisebenzise i-canonical noma ngiqondise kabusha ukuze noma yimaphi ama-backlink ekhasini lami adluliselwe ekhasini elihamba phambili, noma kunjalo.
Kuthiwani Uma Umuntu Ebamba Futhi Eshicilela Okuqukethwe Kwakho?
Lokhu kwenzeka njalo ezinyangeni ezimbalwa ngesiza sami. Ngithola ukuthi kukhulunywa ngesoftware yami yokulalela futhi ngithola ukuthi elinye isayithi lishicilela kabusha okuqukethwe kwami ​​njengokwalo. Kufanele wenze izinto ezimbalwa:
Zama ukuxhumana nesayithi ngefomu labo lokuxhumana noma nge-imeyili bese ucela ukuthi lisuswe ngokushesha.
Uma bengenalo ulwazi lokuxhumana, yenza ukubheka kwesizinda se-Whois bese uthinta oxhumana nabo kwirekhodi labo lesizinda.
Uma benobumfihlo kuzilungiselelo zabo zesizinda, xhumana nomhlinzeki wabo wokusingathwa bese ubazisa ukuthi iklayenti labo lephula i-copyright yakho.
Uma bengahambisani nalokhu, xhumana nabakhangisi besayithi labo ubazise ukuthi bantshontsha okuqukethwe.
Faka isicelo ngaphansi kwe- Digital Millennium Copyright Act.
I-SEO imayelana nabasebenzisi, hhayi ama-algorithm
Uma umane ukhumbula ukuthi i-SEO imayelana nesipiliyoni somsebenzisi hhayi i-algorithm ethile ongayishaya, isixazululo silula. Ukuqonda izithameli zakho, ukwenza ngezifiso noma ukuhlukanisa okuqukethwe okuqukethwe ukuze kubandakanyeke kakhudlwana nokubaluleka kungumkhuba omuhle. Ukuzama ukukhohlisa ama-algorithms kuyinto embi kakhulu.
Tags: i-canonicalamakhasi omuziamakhasi wesifundaphinda okuqukethwephindaphinda inhlawulo yokuqukethweseo sendawoamakhasi asuselwa endaweniindawo eningimultilocationinganekwanenoindexukusesha okuphilayousezingeni lokusesha le-organicusezingenirobots.txtseoimikhuba emihle kakhulu ye-seoseo inganekwaneukweba okuqukethwe
Kungani Amavidiyo Wakho Ebhizinisi Ephuthelwa Uphawu, Nokuthi Yini Ongayenza Ngayo